हुम्लामा पनि औलोका बिरामी – Himalaya TV
Home » समाचार » हुम्लामा पनि औलोका बिरामी
हुम्लामा पनि औलोका बिरामी
२९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ११:५०
हुम्ला, २९ भदाै । हिमाली जिल्ला हुम्लामा सात जना औलो राेगका बिरामी भेटिएका छन् ।
प्रायः तराईका जिल्लामा मात्र देखिने औलो रोग पछिल्लो समय उत्तरी हिमाली जिल्लामा समेत देखिन थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप चुनाैति थपिएकाे हाे । हुम्लाको समुन्द्री सतहदेखि ४ हजार देखि ५ हजार फिट उचाई रहेको जिल्लामा पनि औलो रोग देखिएपछि जिल्ला अस्पताल हुम्लालाई चुनाैति बढेकाे छ ।
हुम्ला जस्तो चिसो ठाउँमा समेत यस वर्ष देखि ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका स्वाथ्य चौकीहरूमा औलो रोगी देखापरेका जिल्ला अस्पताका डा. रन्जित कुमार यादवले बताए । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक दर्जन औलो रोगका लक्षण भएका बिरामी भेटिएको उनले बताए । २०७५ बैशाखमा मात्रै सर्केगाढ गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा २ जान, ताँजकोट गाउँपालिकामा रहेको स्वाथ्य चौकीमा २ जना र अदनचुली गाउँपालिकामा ३ जना औलोका बिरामी फेला परेका छन् ।
गाउँमा औलो रोग फैलिएकाले औषधी र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएको छ । ज्यान जोगाउने चिन्ता बढेको स्थानीयवासी ताँजकोट गाउँपालिका ५ का औलो बिरामी किशोर बुढाले बताए । औलो रोगका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने ‘क्लोरोक्वीन र प्रिमाक्वीन’नामक औषधीको अभाव हुन नदिन जिल्ला स्वास्थय कार्यालय हुम्लाले पहल गरेको जनाएकाे छ।
रोगको नियन्त्रणका लागि अस्पतालसँग भएको औषधी र आवश्यक जनशक्ति प्रयोग भइरहेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा रन्जितकुमार यादवले बताए । जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकामा औलो रोगका बिरामी फेला परेपछि जिल्लाबाट डा. शरोज प्रजापती, ल्याव टेक्निशियन सुनिता तामाङ्गलगायतको टोली औलो रोग प्रभावित क्षेत्रमा खटिएकाे उनले जानकारी दिए ।
चिकित्सकहरूका अनुसार औलो रोग लाग्दा एक्कासी कामज्वरो आउने, ज्वरो आउने, अल्छी लाग्ने, खानामा अरुचि हुने, जाडो लागेर कम्प हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, मन्द ज्वरो आइरहने, दिन बिराएर ज्वरो आउने र कलेजो सुन्निने लगायतका लक्षणहरू देखापर्छ ।
औलो रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ । घर वरिपरी लामखुट्टे बस्ने बासस्थान नष्ट गर्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिने, राति सुत्दा झुलको प्रयोग गनुपर्छ । त्यसैगरी, शरीरका खुला अंगहरूमा लामखुट्टेबाट बच्न सकिने मलम लगाउने, लामखुट्टेविरुद्ध प्रयोग गरिने स्प्रे, लिक्विड, म्याट आदिको प्रयोग गरेमा बच्न सकिन्छ । यदि एक दिन बिराएर ज्वरो आएमा, काम ज्वरो आएमा तुरुन्त चिकित्सककहाँ गएर उपचार गराउनुपर्छ ।